Barashada isku dhafan - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Barashada isku dhafan, ardayda waxay ku bartaan guriga iyo iskuulka. Ardaydu way rogi doonaan kaqeybgalka sidaa darteed wax ka badan 50% dadka dugsiga ayaa ku jira dhismaha maalin dugsiyeed kasta. Waxay kuxirantahay jadwalka maalinlaha ah, ardayda qaarkood waxay wax ku baran doonaan shaqsi ahaan kuwa kalena waxay ku mashquuli doonaan barashada masaafada.
Qorshayaasha Barashada Isku dhafan
Fadlan ogow, qorshooyinka barashada isku dhafan ayaa ah kuwo dareera oo la beddeli karo.
Qaabka isku dhafan, barashada shaqsiyeed waxay dhici doontaa illaa 2 maalmood usbuucii, iyadoo kuxiran awoodda dhismaha.
Awood dhisida waxay noqonaysaa ilaa 50%.
Ardayda ayaa lagu kala fogaan lahaa bulshada dhexdeeda fasalka dhexdiisa, si loo ilaaliyo boosaska udhaxeeya iyaga iyo ardayda kale.
Ardaydu waxay raaci lahaayeen AA | Jadwalka BB.
Kooxda AA waxay tagi doonaan waxbarid shaqsiyeed Isniinta iyo Talaadada, waxayna kaqeyb qaadan doonaan barashada fogaanta Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha.
Kooxda BB waxay kaqeyb qaadan doonaan barashada masaafada Isniinta, Talaado iyo Arbaco, waxayna kaqeyb galayaan waxbarida shaqsiyeed maalmaha Khamiista iyo Jimcaha.
AA gaar ah | Jadwalka BB waa la wadaagi doonaa ka hor inta aan loo dhaqaaqin barashada isku dhafan.
Si buuxda uga qaybqaado shaqsiyaadka / jadwalka fasallada tacliinta.
Maalmaha iskuulka shaqsi ahaanta, imaatinka waxaa qaadan doona macalinka; maalmaha waxbarashada fog, ardaydu waa inay hubiyaan inta lagu jiro kulanka subaxda ama soo gudbinta shaqo maalmeedka.
Maalin aan cudurdaar lahayn ayaa la xusay haddii ardaygu uusan xaadirin fasalka shaqsiyeed maalinti (maalinyadiisii) jadwalka u ahaa, uusan ka qaybgelin maalinta (yada) waxbarashadda masaafada ama aan wicitaan loogu yeerin khadka xaadiritaanka.
Isniinta & Talaadada
Kooxda A Group B
Wuxuu tagaa fasalka-shaqsiyeed.
Ku hawlan barashada fog.
Kooxda A iyo B
ku hawlan barashada fogaanta.
Khamiista & Jimcaha
Kooxda B Group A
Macallimiintu waxay wax u bari doonaan ardayda shakhsi ahaaneed iyo ardayda wax ka barata masaafada isla waqti isku mid ah (waxbarid isku mid ah).
Maalmaha iskuulka shaqsi ahaanta, imaatinka waxaa qaadan doona macalinka; maalmaha waxbarashada fog, ardaydu waa inay iska hubiyaan maalin kasta.
Ardaydu waxay raaci doonaan jadwalka "block" / jadwalka maalinta beddesha, oo la mid ah barashada masaafada buuxda.
Qaabka isku dhafan, ardayda waxay ku lug yeelan doonaan barashada shaqsi ahaan iyo barashada masaafada.
Adeegyada shaqsi ahaaneed ee IEP waxay kuxiranyihiin jadwalka fasalka.
1: 1 Tilmaamaha tooska ah ee wax looga qabanayo himilooyinka iyo ujeedooyinka IEP iyadoo loo marayo Google Meet.
Hawlaha wax laga badalay sida loogu baahan yahay si loo taageero kaqeybgalka, yoolalka IEP iyo kaqeybgalka fasalka inta lagu gudajiro barashada qofka iyo masaafada fog.
Jadwalka ka mid noqoshada (waa is beddeli kartaa)
Laba maalmood oo dugsiga barbaarinta ah oo ku taal Xarunta Waxbbarashada ee Rajada Cusub: 1 maalinti usbuucii qof ahaan; 1 maalin usbuucii barashada masaafada.
Saddex maalmood oo dugsiga barbaarinta ah oo ku taal Xarunta Waxbbarashada ee Rajada Cusub: 1 maalin walba asbuucii qof ahaan; 2 maalmood usbuucii barashada masaafada.
Dugsiga barbaarinta afar maalmood ee Xarunta Waxbarida Rajada New: 1 maalinti usbuucii shaqsi ahaan; 3 maalmood usbuucii barashada masaafada.
Shan maalmood dugsiga barbaarinta ee Laanaka Zachary: 1-2 maalmood usbuucii shaqsi ahaan; 3-4 maalmood usbuucii barashada masaafada.
Shan maalmood oo dugsiga barbaarinta ah ee Xarunta Maqalka ee New Hope / dugsiyada hoose: 1-2 maalmood usbuucii shaqsi ahaan; 3-4 maalmood usbuucii barashada masaafada.
Ardayda iyo qoysaska waxay heli doonaan kalfadhiyo tababar iyo adeegyo ku saleysan Qorshahooda Adeegga Qoyska ee Shakhsi ahaanta midkood ama mid ka mid ah meelaha bannaanka ka dib Tilmaamaha Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (MDH). Ardayda iyo qoysaska waxaa laga yaabaa in lagu casuumo Xarunta Wax Barashada ee New Hope si ay wajiga ugu dhammeeyaan qaybaha qiimeynta hadba sida loogu baahdo.
Awood dhisida waxay noqonaysaa ilaa 30-50%.
Fasalka PreK-8aad wuxuu raaci lahaa AA | Jadwalka BB.
Arbacada waxaa loo isticmaali doonaa maalin nadiifin si loo hubiyo nabadgelyada ardayda iyo shaqaalaha.
Waxbarida shaqsiyeed ee dugsiga sare waxay socon doontaa illaa 1-4 maalmood usbuucii, iyadoo kuxiran awoodda dhismaha.
Barashada waxaa ka mid noqon kara: subaxnimada iyo galab shirarka fasalka / kulamada bulshada-shucuurta; laba baloog barasho oo ku lug leh casharro yaryar, horay loo duubay ama ku-dhaqan toosan oo toos ah; waxqabadyo madax bannaan oo lagu dhajiyay SeeSaw ama Schoology; shaqsi iyo / ama koox yar oo waxbarid leh kal-fadhiyo gaar ah oo toos ah oo loogu talagalay adeegyada IEP iyadoo lagu saleynayo qorshaha barashada masaafada shaqsiyeed ee shaqsiyeed; kala-goynta dhaqdhaqaaqa; qaaska, koorsooyinka xulafada iyo xulashada.
Qiimeynta waxbarashada gaarka ah waxaa lagu sameyn doonaa Xarumaha Taakulaynta Ardayda iyadoo la raacayo borotokoollada ku habboon ee nabadgelyada.
Fadlan ogow, waxaan dib u eegis ku sameyneynaa waalidkeen ECFE iyo koorsada cunugga si aan ula kulanno baahiyaha qoys ee kala duwan, iyadoo mudnaanta la siinayo caafimaadka iyo badbaadada bartayaashayada ugu yar, qoysaskooda, iyo shaqaalaheena. Buug yar oo dib loo eegay ayaa soo socda. Fasallada lagu calaamadeeyay Hybrid waxay u guuri doonaan inay yeeshaan qaybo ka mid ah khadka tooska ah oo leh fursado qoysaska ay ku bartaan goobta kooxo yar yar, markii loo oggolaado inay sidaa sameeyaan, oo ku saleysan hagida iyo tallaabooyinka badbaadada. Xaddidaadda xaddidan ee booqdayaasha goobta awgeed, daryeelka walaalaha lama heli doono.
Macluumaadka Guud (5-maalmood Dugsiga barbaarinta)
Xaddidaadda booqdayaasha goobta darteed, Kaaliyeyaasha waxbarashadu way salaami doonaan ardayda waxayna ugu celin doonaan qoysaskooda dibedda.
Macluumaadka Guud (Dugsiga barbaarinta 2-4 maalmood)
Barnaamijyada basaska wata waxay heli doonaan macluumaad kahor intaan loo gudbin Hybrid.
Qaabka isku-dhafan, barashada shaqsiyeed waxay dhici doontaa ugu yaraan hal maalin usbuucii, iyadoo kuxiran cabirka fasalka iyo awoodda dhismaha.
Carruurta da'doodu u dhexeyso 2-5 waxaa laga codsanayaa inay keenaan maaskaro waana lagu dhiirrigelin doonaa laguna taageeri doonaa barashada sida loogu isticmaalo sida ugu habboon koritaan ahaan.
Kama fileyno in carruurta yar yar ay raacaan dhaqamada kala fogaynta bulshada waqti kasta. Si kastaba ha noqotee, waxaan bari doonaa oo ku dhiiri gelin doonaa carruurta inay "midba midka kale siiyo boos" iyo ka fogaansho bulsho ilaa intii suurtagal ah.
Nadaafad caafimaad oo wanaagsan ayaa lagu dhaqmi doonaa oo la bari doonaa. Carruurtu had iyo jeer way dhaqi doonaan gacmaha maalintii - ka hor intaanay gelin fasalka, ka hor iyo ka dib markay u gudbayaan qaybaha kala duwan ee dhismaha sida goobta ciyaarta ama qolka mootada, iwm.
Kooxuhu waxaa lagula dardaaridoonaa boodhadh aan ka badnayn 9 si loo yareeyo xidhiidhka ka dhexeeya qolladaha, iyadoo laga faaiidaysanayo irridda kala geddisan, isticmaalka qolka loo qorsheeyey iyo tas-hiilaadka lagu dhaqo gacmaha iyo nadaafadda.
Agabka fasalka waa la yareyn doonaa oo waxaa loo qoondeyn doonaa hab maamuus loogu talagalay agabyada iyo dusha taabashada sare. Dhamaan shaqaalaha waxaa lagu tababari doonaa wacyigalinta COVID iyo isticmaalka saxda ah ee qalabka nadaafada.
Meelaha bannaanka ayaa looga faa'iideysan doonaa sida ugu macquulsan.
Waxbarista fasalka-shaqsiyeed ee maalinlaha ah waxaa lasiin doonaa heerka hoose ee ardayda EL iyo GED / Academic Skills inta udhaxeysa saacadaha 9 subaxnimo ilaa duhurnimo. Barashada Fogaanta (DL) waxaa la siin doonaa heerka sare ee EL, qaar ka mid ah ardayda la xushay Xirfadaha Tacliinta iyo xiisadaha istaroogga / maskaxda dhaawaca muddo ah 2.5 saacadood inta lagu jiro xilliga 9:30 subaxnimo ilaa duhurkii. Fasallo ayaa la bixin doonaa si isku mid ah si looga dhigo barnaamijyada Akhriska Qoyska. Ardaydu waxay sidoo kale marin u heli doonaan macallimiinta caawimaadda shaqsiyeed 1.5 saacadood maalin kasta (inta lagu jiro saacadaha xafiiska la dhejiyo iyadoo loo ballamay shaqsi ahaan ama la heli karo jawi macno leh).
Barashada fasalka-shaqsiyeed ee fiidkii waxaa la siiyaa ardayda heerka hoose ee EL iyo GED / Academic Skills ugu yaraan 3 saacadood gudahood waqtiga fasalka pre-COVID ee 4:30 ilaa 8:30 pm Fiidka heerarka sare ee EL waxay bixin doonaan Distance Learning for ugu yaraan 2.5 saacadood gudahood isla wakhtigaas; ardaydaas waxay sidoo kale marin u heli doonaan macalimiinta caawinaad shaqsiyeed 1.5 saacadood maalin kasta (iyadoo loo ballamay shakhsi ahaan ama helitaanka jawi macno leh).
Imtixaanka GED iyo CASAS waxaa la soo bandhigi doonaa ugu yaraan hal subax toddobaad kasta, iyadoo la ballanta, iyadoo la adeegsanayo hab-dhaqanno badbaado leh oo COVID ka dib shuruudaha la xiriira.
Xarunta Taageerada AAP
Ardayda qaangaarka ah waxay sameyn karaan ballamo shaqsiyadeed inta lagu jiro saacadaha loogu talagalay taageerada shakhsi ahaaneed. Kaalmadu waxay noqon kartaa meelaha soo socda ee baahida loo qabo:
Taageero waxbarasho oo loogu talagalay ardaydaas ku dhibtoonaya jawiga dhijitaalka ah
Caawinta tikniyoolajiyadda ardayda la halgameysa tikniyoolajiyadda iyo / ama sofweerka guriga
La-Taliyaha Dugsiga iyo Qolka Kheyraadka ayaa sii wadi doona in la helo
Qaadashada agabyada maaddooyinka tacliimeed ee adag
Sida dadaal sinaan, AAP waxay ka dhigeysaa 20 xarumood kombuyuutar CLC inay diyaar u tahay maalin kasta oo waxbarid ah ardayda leh arrimaha teknoolojiyada / xiriirka internetka inay adeegsadaan. Tani waxay la mid tahay tijaabiyayaasha 'GED' ee yimaada maalin kasta oo ka mid ah imtixaannada la qorsheeyay. Saldhigyadani waxay ilaaliyaan masaafada bulshada oo aamin ah waana la jeermiyaa maalin kasta isticmaal kasta. Imaanshaha ardayda ee la filayo inay aad u yartahay; haddii kale, xadka adag ayaa la hirgaliyay.
Hab maamuuska goobta ciyaarta
Ardaydu waa inay gacmaha dhaqdaan ka hor fasaxa fasaxa iyo isla markay ka soo galaan fasaxa.
Dhismayaasha garoonka ayaa la isticmaali karaa. Dhismayaasha goobaha lagu cayaaro ma fayodhowran maaddaama ay yihiin dadweyne.
Ardaydu waa inay iskula jiraan 6 fuudh inta banaanka lagu jiro.
Ardaydu waxay iska saari karaan waji-bannaanka bannaanka mooyaane haddii aynan hayn karin 6 fiit oo fogeynta bulshada.
Qalabka garoonka lagu ciyaaro (tusaale kubbadaha, xadhkaha boodka, iwm) lama wadaago. Dhammaan qalabka waa la nadiifiyaa oo la nadiifiyaa isticmaalka shaqsiga ka dib.
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay sii wadi doonaan inay raacaan Haga-ciyaarka MDH .
Shaqaalaha iyo carruurtu waxay xirtaan waji-furka guriga gudihiisa illaa laga dhaafo.
Markii ay soo galaan dhismaha, ardaydu waxay dhigaan alaabada qaanadooda ka dibna 20 saacadood ayay gacmahooda ku dhaqaan saabuun iyo biyo, ka dibna ku qallajiyaa tuwaal waraaq ah.
Kala Fogeynta Bulshada waxaa la isticmaalaa maalinta oo dhan (6 fuudh ama in ka badan oo kala fog)
Ardayda waxaa loo qoondeeyay fasal.
Qolladaha Musqulaha fasalku markasta ayay u isticmaali doonaan musqusha iyo gacmaha oo la dhaqo.
Ardayda iyo shaqaaluhu way dhaqdaan gacmaha kahor iyo kadib cuntada oo dhan, kahor iyo kadib markay baxaan, iyagoo isticmaalaya meel kasta oo cusub, iyo markay isticmaalayaan musqusha.
Miisaska iyo kuraasta waa la buufiyaa oo waxaa lagu tirtiraa nadiifiye ka hor iyo kadib cuntada.
Dhamaadka maalinta, shaqaaluhu waxay ku buufiyaan nadiifiye la ogolaaday dhamaan meelaha adag, ha fariisteen 10 daqiiqo ka dibna tirtir. Shaqaaluhu waxay markaa ku buufinayaan nadaafad dusha sare oo ha u qalajin.
Xiriirinta dukumiintiyada raadinta xirxirayaasha (guntin dhejisyada) ayaa laga heli karaa qolalka oo dhan. Shaqaalaha dokumentiga yaa ku jira meeqa meelood 15 daqiiqo ama ka badan.
Darawalka ayaa wejiga daboolaya.
Dhammaan ardayda waxaa looga baahan yahay inay xirtaan maaskarada.
Lama dhaafi karo 50% karti.
Walaalaha waxaa laga codsan doonaa inay wadaagaan kuraasta si loo hubiyo kala fogaanshaha bulsho ee u dhexeeya qoysaska.
Masaafada bulshada sida ugu macquulsan.
Ilaa 50% karti
Ku xaddid baska 31 rakaab ah baska rakaabka qaada ee 71-ka ah; 3-4 rakaab ah oo saarnaa basaska waxbarashada gaarka ah.
Ka bixida Gaadiidka
Qoysaska doorbidaya in ardaydooda (ardaydooda) aysan baska dugsiga uqaadin ama ugasoo qaadin dugsiga (haddii degmadu ay kujirto waxbarasho isku dhafan ama qof ahaaneed) waxay doorteen inay ka baxaan adeegyada gaadiidka sanad dugsiyeedka 2020-2021.
Ka bixitaanku waa ikhtiyaari ikhtiyaari ah.
Qoysaska ka baxay adeegyada gaadiidka marwalba waxay haystaan ikhtiyaar inay dib ugu bilaabaan adeegyadooda iyagoo kala xiriiraya Waaxdayada Gaadiidka 763-504-8091.
Inta lagu jiro maalmaha Barashada Isku-dhafka, ardayda waxay ku cuni doonaan dugsiga. Inta lagu jiro maalmaha Barashada Fogaanta, ardayda waxay heli doonaan xirmooyinka cuntada. Ardayda uqalma dheefaha waxbarasho waxay heli doonaan cunno BILAASH ah. Dhammaan qoysaska waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay codsadaan dheefaha waxbarasho (bilaash iyo qiimo dhimis) khadka tooska ah ee rocketscan.rdale.org .
Ugu badnaan 31 arday oo bas saaran